Indawo yokuhlala ngaphandle kweNamsos 1-14 abantu - I-Airbnb
Indawo yokuhlala ngaphandle kweNamsos 1-14 abantu
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguLine
Ipropathi ikwindawo yasemaphandleni kunye nendawo entle eFjær eBangsund. Umgama omfutshane ukuya kwimilambo emininzi ye-salmon, kunye neendawo zokuzingela. Umgama oya kwindlela enkulu yi-1 km. Isakhiwo sinamagumbi okulala ayi-8 anebhedi eyi-1 ukuya kweye-3. Izindlu zokuhlambela ezi-3 kunye nendlu yangasese ekwabelwana ngayo. Igumbi lokutyela elikhulu, ikhitshi kunye negumbi lokuhlala eziko. Ifanele zombini singles, iintsapho kunye namaqela.
Ukuba unenja, ingahlaliswa kwindlwana yethu.
Indawo yethu ibekwe kanye entliziyweni yeNamdalen, kwaye ifanelekile kuwe odlulayo kwaye ufuna ukuphumla, wena oya kuba neentsuku ezimbalwa kwaye ufumane yonke into esuka ekulobeni elwandle olunzulu kunye ne-rafting eFlatanger, iHlathi kunye nokunyuka kweentaba, okanye ukuthenga. namava esixekweni. Apha kulungile ukurhoxa kwindawo ezolileyo kunye nendawo yokuhlala efikelelekayo, emva kosuku olude noluneziganeko.
Singoyena mmelwane usondeleyo kumlambo i-salmon i-Aursunda, kwaye kufutshane nomlambo we-salmon i-Bogna. Isalmon enkulu ihlala e-Elvenes Dronning Namsen, engekude.
Umbindi wesixeko saseNamsos yimizuzu engama-20 ukusuka apho. Apho unokufumana amava e-Oasen Badeland ezintabeni, eNamsos Kulturhus enemyuziyam yobugcisa kunye nethala leencwadi. Apha unokufumana kwakhona ithiyetha kunye neekonsathi.
INamsos ibizwa ngokuba sisiXeko saseRock. Iziko lamava line-interactive Trønder Rock Museum kunye neNamsos Kino. Kunyanzelekile ukuba unyuke uye e "Klompen", intaba yedolophu yaseNamsos, eyindawo yendalo yokujonga
Ukuba uya kutya phandle, isixeko sineendawo zokutyela ezininzi. Indawo yokutyela yamaTshayina, iMintage Sushie, indawo yokutyela yeTinos kunye nokunye. Kwi-Storsenter yesixeko uya kufumana ibha yekofu yaseKrus. Unathi, ungatshisa ukutya kwakho kwipani yomlilo ngaphandle, okanye usebenzise ikhitshi elikhulu nelixhotyiswe kakuhle. Ehlotyeni kumnandi ukutya ngaphandle ngokujonga ukuya elwandle.
Le ndawo isemaphandleni kwaye ayiphazanyiswanga kangako ngabamelwane.
Umbuki zindwendwe ngu- Line
Kunye nathi, zonke iindwendwe zihlala kwisakhiwo sazo.
Kangangoko kunokwenzeka, sibulisa zonke iindwendwe ekufikeni, kwaye sinike ukhenketho oluncinci. Sisoloko sifumaneka ngemibuzo ngomyalezo obhaliweyo, nge-imeyile okanye ngondwendwe olunkqonkqozayo emnyango wethu. Ngaphandle koko, iindwendwe ngokwazo zilawula indlela ezifuna ngayo intlalontle.
Kangangoko kunokwenzeka, sibulisa zonke iindwendwe ekufikeni, kwaye sinike ukhenketho oluncinci. Sisoloko sifumaneka nge…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bangsund